Tabobar fiidiyow ah: Naqshadeynta jilicsanaantaada firfircoon | Abuurista khadka tooska ah
Tabobar fiidiyow ah: Naqshadeynta majaajillo firfircoon oo adiga kuu gaar ah
Ka dib markaad aragtay inaad heshay mawduuca ah Muusikada Mock-Ups Waxaan diyaariyey fiidiyowyo taxane ah oo waxbadan kaa caawin doona inaad barato sidaad u abuuri lahayd animations kuu gaar ah si aad ugu soo bandhigto mashaariicdaada qaab la yaab leh oo farshaxanimo leh. Waxaan arki doonnaa naqshado kala duwan oo ah jees jees firfircoon oo ka bilaabaneysa tan ugu horeysa oo ka fudud kana raqiisan
Si tan loo sameeyo, waxaan u adeegsan doonnaa Adobe Photoshop, laakiin sidoo kale waxaan dooneynaa inaan is taageerno Adobe Kadib Raadka iyo EZGif. Talaabooyinka aan qaadi doono qaybtaan koowaad waa kuwo aad u fudud waxaanan hoos ku taxay:
Markaad dooratid mashaariicda aad rabto inaad ku abuurto animation-kaaga, waa inaad u soo rartaa Adobe After Effects, laakiin marka hore waa inaad ku sameysaa halabuur cusub meenuga Qaab dhismeedka> Halabuurka cusub.
Waxaan qeexi doonnaa cabirkiisa iyo muddada uu qaadan doono.
Kadib waxaan ku dari doonaa jadwalka sawirada aan dooneyno inaan ka muuqano animationkeena waxaanan u adeegsan doonaa qodobbada barroosinka si aan u nidaamino nidaamka, xawaaraha iyo xadka dhaqdhaqaaq kasta.
Markaan sidan yeelno, waxa kaliya ee aan sameyno waa inaan u dhoofinno halabuurkeenna qaab muuqaal ah adoo galaya liiska Qaab dhismeedka> Ku dar safka ka shaqeynta ...
Waxaan dooran doonaa tayada fiidiyowgeena, qaabka (kiiskan waan isticmaali doonaa Waqtiga ugu Horeeya) iyo dabcan halka loo socdo ama galka lagu keydin doono.
Mar alla markii aan u helno qaab muuqaal ah waa inaan u sameynaa qaab beddelaad tayo leh qaab gif laakiin taas waan arki doonaa qeybta dambe.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » Qalabka Naqshadeynta » Photoshop » Tabobar fiidiyow ah: Naqshadeynta majaajillo firfircoon oo adiga kuu gaar ah
Wuxuushkii zodiac maleeyeen Damon Hellandbrand
Animated Mock Ups: Waa hab cusub oo lagu soo bandhigo shaqadeena